ဆေးလိပ်သောက်သူတွေဆို အလုပ်မခန့်ဘူးလို့ ပေါ်လစီအသစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံ
ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေဆို အလုပ်မခန့်ဘူးလို့ ပေါ်လစီအသစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ ပြုမူတတ်ကြတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာများ
သင့်ကလေးကို သင်ပေးထားရမယ့် ဒီစကားလုံး( ၅)လုံးရဲ့ အရေးပါမှု
ကလေးတွေကို ညဏ်ကောင်းပြီးပျော်ရွှင်စေတဲ့ဘဝတစ်ခု ရစေချင်ရင် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့နည်းလမ်းများ
သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ပွေ့ချီနည်း (၆)မျိုး
Relationship တစ်ခုမှာ (gaslighting) စိတ်ဓါတ်တွေ ရိုက်ချိုးခံနေရတဲ့ လက္ခဏာ (၁၂)ခု
စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ နည်းလမ်းများ
မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို မကာကွယ်ပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၅) ချက်
ရဲကလည်ပင်းကို ဒူးနဲ့ထောက်ထားရာမှ သေဆုံးသွားမှုအတွက် အကြမ်းဖက်မီးရှို့မှုတွေမြင့်တက်
ကလေးငယ်တွေဆီကနေ ကျွန်မတို့ ဘာတွေသင်ယူနိုင်မလဲ?
သင်သိထားသင့်တဲ့ ကလေးတိုင်းအတွက် ဗီတာမင် စီ
လိုချင်တာကို မရမကပူဆာတတ်တဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းမလဲ
in Health & Beauty, News
ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေသလို သောက်သုံးသူမက ဘေးပတ်ဝန်ကျင်ရှိ လူတွေကိုလည်း ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေထဲက နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုလျော့ချဖို့အတွက်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ ယခုအခါ ဂျပန်နိုင်မှာလည်း ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူကို ကင်းစင်သထက် ကင်းစင်အောင် လျော့ချပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ခေတ်သစ် တိုကျိုအိုလံပစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်းတီးဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။
Daily Mail သတင်းအရ ဂျပန်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SoftBank တော့ အလုပ်ချိန်အတွင်း ကုမ္ပဏီဝန်းထဲမှာဖြစ်စေ၊ ပြင်ပမှာဖြစ်စေ ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကို လကုန်မဲ့အပတ် သောကြာနေ့တိုင်းတိုင်းမှာ ထွက်လေ့ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာတုန်းကလည်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကို ဆေးလိပ်မသောက်သုံးရနေ့ဆိုပြီးတော့ ထည့်သွင်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ စည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့သူတွေကို အပစ်ပေးအရေးယူခြင်းမျိုးတွေ လောလောဆယ်မှာတော့ အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာမှာ ဆေးလိပ်သောက်သုံးခွင့်ကို ခွင့်ပြုထားတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လည်း အလုပ်ခေါ်တဲ့အခါ ဆေးလိပ်သောက်သုံးတယ်၊မသောက်သုံးဘူးဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီး အလုပ်ရဖို့ အခွင့်အရေး ရှိမရှိ ထည့်သွင်းဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဘက်ကလည်း လာမည့် ၂၀၂၀မတိုင်ခင် ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူ ၁၇.၇% ကနေ ၁၂% အထိ လျော့ချသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Nagasaki တက္ကသိုလ်မှာလည်း ပါမောက္ခ သို့မဟုတ် ဆရာတွေ ငှားရမ်းတဲ့အခါ ဆေးလိပ်သောက်တတ်တဲ့သူတွေဆို ငှားရမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တတ်ပေမဲ့ အလုပ်ရရင် ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ်လို့ ကတိပေးထားရင်တော့ အလုပ်အတွက် အခွင့်အရေးပေးမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ကဲ! ဂျပန်ကတော့ သူ့နိုင်ငံနဲ့ သူ့ပြည်သူတွေကောင်းစားဖို့ အတွက် ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကို နည်းလမ်းကောင်းကောင်းကို အသုံးချပြီး စတင်နေပါပြီး။ အကယ်လို့ သင်က ဒီနိုင်ငံရဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဆိုရင်ရော ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ဝန်ထမ်းတွေ ဆေးလိပ်ဖြတ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်မှာလား?
လက်နှစ်ဖက်မရှိပေမဲ့ လူကောင်းလိုအဖွားအိုကို ပြုစုစောက်ရှောက်နေတဲ့ အမျိုးသား
ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူေတြဆို အလုပ္မခန္႔ဘူးလို႔ ေပၚလစီအသစ္ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ဂ်ပန္နိုင္ငံ
ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းဟာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစသလို ေသာက္သုံးသူမက ေဘးပတ္ဝန္က်င္ရွိ လူေတြကိုလည္း ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ေပါေစနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြထဲက နိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးမွုေလ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လွုပ္ရွားေနၾကပါတယ္။ ယခုအခါ ဂ်ပန္နိုင္မွာလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူကို ကင္းစင္သထက္ ကင္းစင္ေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ ေခတ္သစ္ တိုက်ိဳအိုလံပစ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္းတီးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။
Daily Mail သတင္းအရ ဂ်ပန္အေျခစိုက္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ SoftBank ေတာ့ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ကုမၸဏီဝန္းထဲမွာျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပမွာျဖစ္ေစ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းကို တားျမစ္ထားပါတယ္။ ကုမၸဏီရဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို လကုန္မဲ့အပတ္ ေသာၾကာေန႔တိုင္းတိုင္းမွာ ထြက္ေလ့ရွိၿပီးၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာတုန္းကလည္း ဗုဒၶဟူးေန႔ကို ေဆးလိပ္မေသာက္သုံးရေန႔ဆိုၿပီးေတာ့ ထည့္သြင္းခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ စည္းကမ္းမလိုက္နာတဲ့သူေတြကို အပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမ်ိဳးေတြ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အစီအစဥ္မရွိေသးပါဘူး။ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ေနရာမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးခြင့္ကို ခြင့္ျပဳထားတုန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔လည္း အလုပ္ေခၚတဲ့အခါ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးတယ္၊မေသာက္သုံးဘူးဆိုတာေပၚမူတည္ၿပီး အလုပ္ရဖို႔ အခြင့္အေရး ရွိမရွိ ထည့္သြင္းဆုံးျဖတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဘက္ကလည္း လာမည့္ ၂၀၂၀မတိုင္ခင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူ ၁၇.၇% ကေန ၁၂% အထိ ေလ်ာ့ခ်သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ Nagasaki တကၠသိုလ္မွာလည္း ပါေမာကၡ သို႔မဟုတ္ ဆရာေတြ ငွားရမ္းတဲ့အခါ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္တဲ့သူေတြဆို ငွားရမ္းမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္ေပမဲ့ အလုပ္ရရင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္မယ္လို႔ ကတိေပးထားရင္ေတာ့ အလုပ္အတြက္ အခြင့္အေရးေပးမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ကဲ! ဂ်ပန္ကေတာ့ သူ႔နိုင္ငံနဲ႔ သူ႔ျပည္သူေတြေကာင္းစားဖို႔ အတြက္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ကို နည္းလမ္းေကာင္းေကာင္းကို အသုံးခ်ၿပီး စတင္ေနပါၿပီး။ အကယ္လို႔ သင္က ဒီနိုင္ငံရဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးဆိုရင္ေရာ ဒီနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳၿပီး ဝန္ထမ္းေတြ ေဆးလိပ္ျဖတ္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွာလား?
by Mg Htet
အမေရိကန်နိုင်ငံ မင်နီယာပိုလိစ်မြို့တော်မှာ လူမည်းအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့George Floydသေဆုံးရာကစတဲ့ ဆန္ဒပြမှုဟာ ၂ရက်မြောက်အထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီး သေဆုံးသွားသူအတွက်တရားမျှတမှုရဖို့ ရာနဲ့ချီတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေကအကြမ်းဖက်မီးရှို့ဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က အသက် ၄၆နှစ်အရွယ် George Floydဆိုသူကိုကုန်စုံဆိုင်တစ်ခုရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ ရဲကသံသယရှိလို့ ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ ရဲကားဘေးနားမှာ လက်ထိပ်ခတ်ထားပြီးမှောက်လျက်ရှိနေတဲ့သူရဲ့ လည်ပင်းကို...
ပျိုမေတို့ရဲ့ ဆံနွယ်တွေကောင်းမွန်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ အစားအစာများ
ဆံနွယ်တွေရဲ့ ကောင်းမွန်မှုဟာ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ အသက်အရွယ်အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဆံသားမကောင်းခြင်းနဲ့ ပြတ်ခြင်းတို့ကိုတော့ ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုနည်းလမ်းတွေထဲကမှ ပျိုမေတို့ရဲ့ဆံနွယ်တွေကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် အစာစားရင်းနဲ့ ထိန်းသိမ်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ကြက်ဥ ကြက်ဥတွင် ဆံနွယ်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်စေတဲ့ ဇီဝဓါတ်များဖြစ်တဲ့...
ကျောက်ကပ်ကို သန့်ရှင်းပေးတဲ့ သောက်သုံးစရာ ၅ မျိုး
ကျောက်ကပ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါတခုပါ။ ၎င်းဟာ သွေးထဲမှာပါတဲ့ အဆိပ်တွေကို စစ်ထုတ်ပြီး ဆီးလမ်းကြောင်းကနေ စွန့်ပစ်ပေးတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးခြင်း၊ အရိုးတွေသန်စွမ်းဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်-ဒီ ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ သွေးနီဥများထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့...
ဒူဘိုင်းမှာ အိန္ဒိယစူပါစတား Sridevi ရဲ့ ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုက ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်အထိကြာအောင် လူပြောအများဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ်မင်းသမီးဟာ မတော်တဆရေနစ်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်လူမျိုးတွေအတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေကို ယူဆောင်လာတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ကြယ်ပွင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာ ကမ္ဘာကြီးကို...